Puntland Voice – Page 995 – Codka Dalka iyo Dadka
Maxkamada Muqdisho ee Xarakada Alshabaab oo Maanta fulisay xukuno kala duwan.
Muqdishjo (AB):-Maxkamada Islaamiga Magaalada Muqdisho ee hoostagta xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa maanta fulisay xukuno kala duwan kuwaasoo kala ahaa xad iyo tacsiir. Gabar 20 jir ah oo lagu magacaabo Zaynab Yuusuf Faarax ayay maxkamadu ku xukuntay xukun ahaa xadu Zinaa […]
Deegaanada Galgalo iyo Karin ee Puntland oo markii ugu horeysay uu ka qarxay dagaal u dhexeeya maamulkaasi iyo xooggaga deegaanka ka soo jeeda.
Galgalo (AB):-Wararka ka imaanaya deegaanada Buuraleyda Galgalo iyo Karin ee Gobolada Bari iyo Sanaag ayaa sheegaya in halkaasi uu Saaka ka qarxay dagaal u dhexeeya Ciidamada BIS-ta loo yaqaan ee Maamulka Puntland iyo ciidamo la sheegay inay hoos tagaan wadaad […]
kulankii ugu horeeyay oo dhexmaray Madaxweyne Shariif iyo wakiilka Qarmada Midoobey ugu qaabilsan arimaha Soomaaliya
Kambaala (AB):-Wakiilka cusub ee qaramada Midoobey ugu qaabilsan arimaha Soomaaliya Mahiga Augustine iyo Madaxweynaha Dowlada KMG Soomaaliya Sh.Shariif Sh.Axmed ayaa markii ugu horeysay kulan ku wada yeeshay magaalada Kambaala ee Xarunta Dalka Uganda halkaasoo uu shir uga socdo madaxda dalalka […]
Soomaaliya astaanta dib u dhaca (Faallo)
Mar walba oo la sheego dib u dhac waxaan shaki ku jirin in maankaaga dalka Soomaaliya ay u soo degdegayso, dal aanan lahayn dhamaan intii lagama maarmaanka u ahayd nolosha bini aadanka sida nabad, koronto, biyo nadiif ah, cunto tayaysan, […]
Qaraxyo xalay siyaabo kala duwan loogu weeraray ciidamada Dowlada KMG ee Muqdisho ku sugan
Muqdisho (AB) :-Degmooyinka Xamar jajab,Wadajir iyo dharkeenley waxaa xalay ka dhacay qaraxyo is xig xigay oo lala beegsaday ciidamada Dowlada KMG Soomaaliya kuwaasoo gaystay khasaare isgu jirtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray shacab iyo askar. Qaraxa ka dhacay Xamar jajab […]
Askari ka tirsan Maamulka Puntland oo Maanta lagu dilay Magaalada Boosaaso.
Boosaaso (AB):-Mid ka mid ah ciidamada canshuuraha qaada kana tirsan Maamulka Puntland ayaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari. Qaar ka mid ah ciidamada oo howlgalo ku jirey ayay ku jireen askarta dhibaatada la gaarsiiyay waxaana uu falkaani […]
Mid ka mid ah Hay'adaha ka howlgala gobolka Bay oo ku dhawaaqay inay joojiyeen howlihii ay ka hayeen magaalad Baydhabo
Boosaaso (AB):-Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in hay’ada International Medical Corps ay gabi ahaanba joojisay howlo ay ka hayeen magaaldaasi iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya. Mas’uuliyiin u hadlay hay’adaasi ayaa ku macneeyay sababta ay uha baxayaan Koonfurta Soomaaliya […]
Yuusuf Indhacade oo sheegay inaaney waxba soo kordhineyn ciidamo shisheeye oo xiligaan dalka lagu soo kordhiyo.
Muqdisho (AB):-Wasiiru dowlihii hore ee wasaarada gaashaandhiga Dowlada KMG Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade iyo wasiirkii hore ee wasaarad qorsheynta iyo iskaashiga C/raxmaan Cabdi Shukuur ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho iyagoo ka soo degay garoonka diyaaradaha Muqdisho. Yuusuf […]
Madaafiic khasaare Nafeed gaystay oo Maanta ku soo dhacay suuqyada Bakaaraha iyo Xamar weyne
Muqdisho (AB):-Dhowr madfac ayaa maanta ku shacay suuqayada Xamarweyne iyo Bakaaraha kuwaasoo ay kala maamulaan Dowlada KMG Soomaaliya iyo xarakada Mujaahidiinta Alshabaab. Inta laga war hayo 2 ruux ayaa ku geeriyootay madfaca ku dhacay suuqa xamar weyne ee magaalada Muqdisho […]
Ciidamada Xisbul Islaam iyo kooxo hubeysan oo Maanta ku dagaalamay deegaanka calamada.
Wararka ka imaanaya duleedka Magaalada Afgooye gaar ahaan halka lagu magacaabo Calamada ayaa sheegaya in halkaasi ay maanta barqanimadii ay isku rasaaseeyeen ciidamo ka tirsan Xisbul islaam iyo kooxo baastoolado ku hubeysanaa. Inta la ogyahay waxaa iska horimaadkaasi ku dhaawacmay […]
« Previous 1 … 993 994 995 996 997 … 1,044 Next »